Hiran’ny efi-panoratana Global Voices taona 2021 · Global Voices teny Malagasy
Hiran'ny efi-panoratana Global Voices taona 2021
Nozarain'ny sasany amin'ny tonianay ny hira tiany indrindra tamin'ny taona
Voadika ny 08 Janoary 2022 5:08 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, українська, Español, English
Sary namboarin'i Giovana Fleck.
Raha nanome efitra ho an'ny zavakanto sy ireo piesy amin'ny feo hatrany ny Global Voices hatramin'izay, tamin'io taona lasa io izahay nandray ny hira tianay amin'ny ambaratonga vaovao tanteraka! Namoaka ny [playlists] fandaharan-kira Spotify sy YouTube izahay mba hahatonga ny lahatsoratray hivoaka kokoa ary namoaka ny pejy fitantarana manokana Striking the wrong notes [mitendry ny feo mivalana] izay misavasava ireo hira voarara [mg] manerana izao tontolo izao. Ny sasany amin'ireo hira malaza ato dia mahakasika ny hiram-panoherana, fampisehoan'ny queer, ary ny fanomezan-kery indray ny feo nentim-paharazana afrikana.
Ankehitriny raha mitodika indray amin'ny taona 2021 izahay, tianay ny hanasongadina ny anjara toerana manokana nomena ny hira ho an'ny efi-panoratana ato aminay amin'ny fanasongadinana ireo hira tian'ireo tonia indrindra tamin'ny taona nodiavina. Indro ary ny fandaharan-kira Youtube sy Spotify mampiseho ireo hira 12 nofinidin'ny vondrom-piarahamonina efi-panoratana izay maneho tsara indrindra ny taona 2021. Jereo ny fanazavana ataonay etsy ambany.
Filip Noubel, Tonia Mpanatanteraka:
To, čo nás spája (izay mampifandray antsika, amin'ny teny Slovak) – Živé Kvety
Tarika avy ao Slovakia izay vehivavy no betsaka ny Živé Kvety ary mihira ireo lohahevitra ara-piarahamonina ahitana ny lahy-vavy, fanavakavahana, mafia, ary matetika manao fampisehoana ao Prague. Ny hira To, čo nás spája — Izay mampifandray antsika amin'ny teny Slovak — dia miresaka tanjaka hita amin'ny firaisan-kina hanohitra ny fanavakavaham-bolonkoditra, mifototra amin'ny mahaolona, ary mampiditra ny fanahiny. Misy ihany koa ny embona ao amin'ny Repoblika Tsheky ho an'ireo olona mihoatra ny 40 taona nandritra ny fotoana naha-teny ofisialy hafa ny teny Slovak izay re na aiza na aiza ao amin'ny fampitam-baovao, any am-piasana, eny an'arabe. Nisaraka ny tarika tamin'io taona lasa io, koa dia fanomezam-boninahitra ity vondrona mahatalanjona ity ihany koa izany. Samy manao fampisehoana ho azy any ry zareo.
Nevin Thompson, Mpitarika amin'ny Media Sosialy:
Sweet and Lovely – Thelonious Monk (notontosain'ny Thelonious Monk Quartet niaraka tamin'i John Coltrane tao amin'ny Carnegie Hall tamin'ny taona 1957)
Matetika aho no mihaino ny Thelonious Monk rehefa manoratra, tahaka ny hoe mba milalao piano rehefa milalao kitendry. Lasitra jazz mahatalanjona ny ‘Sweet and Lovely’ sady ahitana kely ny Americana. Manala vony, mampiaiky ary mahafinaritra ny fomba fihiran'ny Monk, sady manainga fanahy, manome hery ahy ary mandeha ahy ho any amin'ny faritry ny fanoratana. Ambonin'izany, ahitana an'i John Coltrane ity iray ity. Very nandritra ny taona maro ny fampisehoana ‘Thelonious Monk Quartet with John Coltrane at Carnegie Hall’ mandra-pivoahany tamin'ny taona 2005, ka isaky ny mihaino ity aho, eny fa na dia somary rakitra vaovao na famoahana vaovao aza, dia mahatsiaro ho special. Manana ny angovo aho amin'izay rehetra soratako na ahitsiko rehefa mampireondreona ilay hira.
Anna-Cat Brigida, Tonia:
Patria y Vida – Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, ary El Funky
Hiram-panoherana kiobàna mitaky fahafahana avy amin'ny mpitondra ankehitriny sy avy amin'ny fomba fitantarana ny taloha momba ny revolisiona kiobàna ity hira ity. Mitondra ny lohateny hoe Patria y Vida (Tanindrazana sy Fiainana) izay lalaonteny amin'ilay fehezanteny hoe Patria o Muerte (Tanindrazana na Fahafatesana) izay famerenan-kira iraisan'ny revolisiona. Mampitsangambolo ahy hatrany izy ity isaky ny mihaino azy aho! Mivantana ihany koa ny tononkira ary miresaka ireo lonilony rehetra tsapa ao Kiobà, sy any amin'ny faritra maro ao Amerika Latina ihany koa.
Mong Palatino, Tonia Azia atsimo atsinanana:
Satria io no lakolosy fanairan'ny vadiko, satria malaza tokoa izy ity ato an-tokantrano, eto Filipina, ary eny fa hatramin'ny eto amin'ny aterineto aza. Mitaratra ihany koa ny fanjakazakan'ny K-pop ity hira ity, ary mampianatra ahy hahatakatra bebe kokoa ny tsironkira sy ny fihetsehampon'ny tanora, ao anatin'izany ny zanako.
Giovana Fleck, Tonia:
Ity hira ity no maneho ny zavatra alahelovako indrindra tamin'ny taona 2021: misintona olona tiana handihy ‘coladinho’ eny amin'ny lanonana an-dalambe <3 Mitondra ahy ho any amin'izany fizaran-tsehatra izany izy ity ary tiako izany!
Ameya Nagarajan, Tonia mpiray dia:
Tamin'iny taona iny aho nanana namana tsy nifankafoy ary niaraka niatrika ny firindrinana sy ny fahasahiranana noho ny fiaraha-miaina akaiky. Mankafy fatratra io hira io ny mpisipa iray, ary milalao azy io izahay isaky ny miara-mivoaka, ka fenoin'ity hira ity fifaliana sy finamanana aho.
Tanya Lokot, Tonia Eoropa atsinanana:
Io no hira nampidirin'i Okraina tao amin'ny Eurovision. Tsara satria manafangaro ny lohahevitra hiram-bahoaka Okrainiana amin'ny gadona maoderina, sady mampiroborobo ny kolontsaina sy ny loko sy soritra manintona ny Okrainiana no mampiseho fa tena manaraka andro tokoa. Jereo eto bebe kokoa soritra sy ny tantaran'ilay hira.
Arzu Geybullayeva, Tonia Kaokazy Atsimo sy Torkia:
Nandritra ny valan'aretina aho nanomboka nandihy nandritra ny fanazara-tenako ary mampelona fihetseham-po fotsiny ity hira ity. Tsaroako aza fa efa namoaka ny horonantsariko nandihy tamin'ity hira ity aho.
Mohamed ElGohary, Mpitantana Lingua:
Tarika efa niato tao anatin'ny efapolo taona, tsy miova hatsarana, tsy miova fahatsorana sy fahasarotana. Mitondra antso ho amin'ny fanantenana, finoana, fifandraisana sy firaisankina. Karazany miteny amin'ny GV taona anatin'izay taona maro izay fa “mbola manana finoana anao aho.” Anisan'ny hira tiana ihany koa ny hira maro ao amin'ny rakikira. Hira krismasy tsara ny Little Things.
Skye Hernandez, Tonian'ny The Bridge _ Tetezana:
Tsy nihevitra mihitsy aho hoe hisafidy hiran'i Justin Bieber izany amin'ny hira nankafizina tao anatin'ny volana iray, indrindra indrindra fa ho amin'ny taona iray, saingy tiako ity hira ity. Ao anatin'ny taona aho rehefa tsy mahazaka zavatra mahery vaika, na hira na sarimihetsika, nihaino hira pop maro aho, ‘afrobeats’ sy hira latinina mampandihy, saingy ity hira ity, izay mitsoka sy tsy miahiahy, dia mahatonga ahy hahatsapa fiadanana isaky ny mitendry azy, ary dia nahazo ny safidiko. Ny fiarahan'ny feo Kanadiana roa, Bieber sy Daniel Caesar, sy ilay mampitsonika an'i Giveon, no nanampy azy io ho ankafiziko. Mitondra ahy hatrany ho lavitry ny sehatra Covid iray manontolo araka ny notadiaviko izany. Ankafizo!
Dércio Tsandzana, Tonia Afrika miteny paortiogey
Ity no fanehoana ny vahoaka iray – ny fanahin'ny kaontinanta iray.
Melissa Vida, Tonia Amerika Latina:
Mifofo hafaliana, fahatokiana ary fanantenana amin'ny gadona marimba ity hiran'ny Kolombiana-Kanadiana Lido Pimienta ity, ao anatin'ny fanekena fa mety ho sarotra ny fiainana indraindray. Manampy ahy ity hira ity hifandray amin'ny fifaliana, amin'ny lalako eo amin'ny fiainako, ary amin'ny Tany Reny (Mpamelona) rehefa mahatsiaro kivy aho.
Ao anatin'izao vanim-potoana izao isika afa-mifandray amin'ny alalan'ny mozika hanainga ny fanahintsika, ary hanao ny asa izay ataontsika. Karohy ny horonantsariny maha-te-ho-tia ao amin'ny YouTube.